Ihe niile banyere Barcelona - Chọpụta ihe ị ga-eme ma mee n'obodo! | Njem zuru oke
Barcelona bụ obodo na mpaghara dị na mpaghara kwurula nke Catalonia. Obodo nke abụọ kacha biri na Spain niile na-edebekwa ọtụtụ ihe nzuzo. La Sagrada Familia bụ otu n'ime isi ihe mbụ anyị na-agaghị agbaghara ileta. Ọrụ Gaudí malitere na 1883. Mgbe ọ gasịrị, anyị ga-aga na Gothic Quarter, nke bụ otu n'ime ndị kasị ochie.
Nke mere na ekwuru na o sitere na mgbe ndi Rome. N'ime ya, ị gaghị enwe ike ịkwụsị ile Katidral nke Santa Creu i Santa Eulàlia anya. Ga-ahụkwa Plaza de Sant Felip ma ọ bụ Plaza Real n'etiti ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ World Heritage Site, anyị ga-ahụ Casa Batlló, nke ị ga-ahụ na Paseo de Gracia, ebe ị ga-ahụkwa Casa Milá.
Ije ije na Ramblas enweghị ike ịhapụ n'azụ njem gị. Otu kilomita na ọkara njem ebe ị ga-ahụ ndị na-ese ihe n'okporo ámá na ọtụtụ ikuku. Ọzọ nke fashionable agbata bụ El mụrụ na n'ezie, Park Güell bụ ihe ọzọ nke dị mkpa ebe na Barcelona. Iji wetara gị ihe ncheta kachasị mma site na echiche panoramic, echefula Montjuic ma ọ bụ Tibidabo.
por Daniel eme Ọnwa 9 .
Ọ bụrụ na ị ga-aga Barcelona, ​​ị ga-enwerịrị ike iji maapụ iji gafee ma gaa ebe nlegharị anya niile nke ...
Nleta dị mkpa mgbe ị na-aga Barcelona
por Susana godoy eme Afọ 1 .
You na-aga Barcelona? Ọ bụ otu n'ime oge ịhazi nleta maka ụdị ndị njem na, mana, ...
Ọ bụ eziokwu na Barcelona bụ otu n'ime ebe ndị isi na-ahụ maka njem nlegharị anya. Ma eleghị anya, ọ bụ ya mere onye ọ bụla ...
Montjuic Castle bụ ebe ndị agha wusiri ike dị na obodo Barcelona. More kpọmkwem na ...
Ülọ Güell bụ ụlọ nke nnukwu onye nrụpụta Antonio Gaudí mere. Ọ dị nso na ...
Ọ bụrụ na e nwere otu omume ọma e ji mara Spain, ọ bụ ọtụtụ na iche nke ntọala ya. Anyị nwere ike ịgba ọsọ na ...
Ngwurugwu kachasị mma na Barcelona
Anyị na-ama na-atụ anya na ezigbo ihu igwe. Tinyere ihe ndị ọzọ, ịnwere ike ịnụ ụtọ mbara ala kachasị mma na Barcelona….
5lọ ahịa sofa XNUMX kacha mma na Barcelona
por Ezigbo Barcelona eme 4 afọ .
Naanị ịbanye na ịchọ arịa ụlọ ọhụrụ dị ọnụ ala? You kpebiri na ọ bụ oge iji nye ya mgbanwe nke ...
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ileta Barcelona mgbe ahụ ntuziaka ndị njem Barcelona a zuru oke bụ ihe ị na-achọ. Na ibe a…
Atụmatụ "Dedicate a Star" na weebụsaịtị Barcelona City Council na-enye ohere ka nwa amaala ọ bụla nke Barcelona rara ...